"Le ncwadi ibhalwe nguwe", izinselelo zokubhala ezingama-78 | Izincwadi Zamanje
«Le ncwadi ibhalwe nguwe», izinselelo zokubhala ezingama-78 zokudala
U-Eva Maria Rodriguez | | Amabhuku
Incwadi ejabulisa ngempela iyaqhubeka nokuthengiswa kusasa. Njengoba ngazi ukuthi abafundi abaningi bale bhulogi bangababhali, abafisa ukuba ngababhali noma, okungenani, banezinkinga zemibhalo njengabadali, bengicabanga ukuthi uzoyithanda le ncwadi. Sengivele ngiyibekele. Ingabe mayelana Le ncwadi ibhalwe nguwe, of UCarlos Garcia Mirandae ESpain, incwadi enama-78 izinselelo zokubhala ezinobuciko uqobo lwayo, incwadi esemgqeni wezincwadi eziphumelelayo ezisebenzisanayo ezikhuthaza ubuhlakani, lapho umfundi ethatha indima ebonakalayo ukuqedela izivivinyo eziphakanyiswa yincwadi.
Ngaphezu kwalokho, noma ngabe awukaze ucabange ukubhala, ngincoma ukuthi ukuthenge futhi udlale ngakho. Ngithi dlala ngoba, njengoba uzobona, iziphakamiso zijabulisa kakhulu. Ngabo uzofunda ukukwazisa kakhulu okufundayo.
Yini «Le ncwadi ibhalwe nguwe»
Ubhala le ncwadi I-tú iyincwadi yokubhalela yokuthuthukisa ubuhlakani ngokuzijabulisa nokukhuthaza izivivinyo zokubhala zokudala. Uphakamisa ukuthi usungule abalingiswa bakho, ukuthi wakhe izingxoxo ezingenakwenzeka, uphinde utolike izinganekwane zakudala, uqeqeshe ulimi lwakho futhi uzakhele ama-neologisms akho.
Bamba ipensela, irabha, amapeni ambalwa anemibala bese ... ulungele ukubhala, ukudweba, ukucabanga, ukudala, futhi ngaphezu kwakho konke ukunikezela ngokukhululeka kuleyo mibono ebilokhu ikhona ekhanda lakho cishe ungazi. Ngokwenza kanjalo uzozijabulisa, uzohlupheka, uzohleka, uzokhala ... Ingabe uyalinga? Thola ubuhlakani onabo ngaphakathi!
Ungabona amakhasi okuqala we Le ncwadi ibhalwe nguwe lapha
Mayelana noCarlos García Miranda
UCarlos García Miranda ungumbhali wombhali wethelevishini odumile ngenxa yochungechunge olufana ne- Intership (kuthengiswe emazweni angaphezu kwama-30), Abavikelwekanjalo Ukucula bukhoma. Umbhali we Kuxhunyiwe futhi of Okuhlobene, eshicilelwe ku-Destiny, ubhala ibhulogi ngezincwadi ku-Huffington Post.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » «Le ncwadi ibhalwe nguwe», izinselelo zokubhala ezingama-78 zokudala
Sawubona, incwadi izofika ePeru
I-Slim Leybian kusho
Sawubona imikhonzo evela ePanama City. Ngikutshela ngokushesha okukhulu. Ngingumbhali, empeleni, nginesipelingi esibi. Kepha ngonyaka odlule umqondo wokwenza izindaba ezi-5 zezingane lapho ngifuna ukugqamisa khona izindinganiso ezinjengenhlonipho, ukubonga, ekugcineni, sengivele ngenze ababili bazalwa ngosuku olufanayo bafushane, anginaso iseluleko. Lokho kusho ukuthi, akekho ozongiqondisa, ngizobheka umuntu ozongiqondisa noma okungenani angitshele ukuthi lokhu kulungile noma akulungile. Futhi iqiniso ukuthi nginothando olukhulu lokuzenza. Enye ibizwa ngeLola's Farm kanti enye ibizwa ngeSoledad Rabbit. Ngifuna ukufunda. Kuningi kakhulu engineminyaka engama-57, izifundo ezimbalwa futhi angikhulumi ngezezimali lutho ephaketheni lami kodwa Ngifuna iphupho lami ligcwaliseke.ngiyabonga ngokwabelana ngamava akho. inkosi ikubusise
Phendula i-Leybian Slim
Iyaqhubeka nokuthengiswa "Ngifundise isibhakabhaka", nguLof Yu, inoveli yentsha efingqiwe kakhulu
Abaphumelele ama-Oscar abangama-26 ekuguquleni amahlaya e-DC